Semalt: Ibhizinisi Eliyimpumelelo Le-Intanethi
Iqembu Le-Semalt: Ochwepheshe Kwinkonzo Yakho
Isingeniso sezinsizakalo Zokumaketha Kwedijithali
Amabhizinisi aphumelele ngeSemalt. Kanjani?
Njalo ukuvuselelwa okusha okuvela ezinjini zokucinga kubamba abanikazi bebhizinisi ngokwesaba okungaziwa. Umbuzo ojwayelekile ufana yonke indawo - "Ungayibeka kanjani indawo iwebhusayithi yami ekhasini lokuqala le-Google?"
Ukuze ubeke iwebhusayithi kuwebhusayithi yokuqala yenjini yokusesha, udinga ukugxila ezicini ezihlukile ze-SEO. Njengoba wonke umnikazi webhizinisi engeke akwazi kahle ubuciko be-SEO, ama-ejensi amaningi okuthengisa amaDijithali athembisa ukuwasiza.
Kuzwakala kukuhle, kepha ama-ejenti ambalwa kuphela angathembeka uma kuziwa simo sewebhusayithi ekhasini lokuqala lanoma iyiphi injini yokusesha. Kulezi zinsuku, igama ngemuva kwempumelelo yamabhizinisi amaningi online yiSemalt. Qhubeka ufunde ukuze uthole okuningi ngakho.
USemalt wasungulwa ngonyaka ka 2013 njengenkampani kaNdunankulu ye-IT. Indlunkulu yayo ikhona eKyiv, e-Ukraine.
Inikezela ngezinsizakalo ezisebenza kahle kakhulu Zokukhangisa nge-Intanethi ngenani elingabizi. I-Semalt ihlose izinsizakalo zayo kubanikazi bebhizinisi, ochwepheshe bezokumaketha, abahlaziyi, kanye nama-webmasters emhlabeni jikelele.
Ngokuyinhloko, uSemalt unikeza okulandelayo:
Ukuphakanyiswa kwe-SEO esezingeni eliphakeme
Amavidiyo Wokukhuthaza Amabhizinisi
Ukuthola ukuthi ngabe i-Digital Marketing Agency isebenza kahle noma cha, thola ukuthi iziphi izinzuzo ezingafani namakhasimende ayo azitholayo. Ngaphandle kokukhulisa ibhizinisi lakho ukuphakama okusha, nazi ezinye izinzuzo eziningi ozithola kwaSemalt:
Ochwepheshe abanamakhono batholakala ngo-24x7
Usebenze ngaphezu kwamakhasimende angama-300,000
Izinsizakalo ezisezingeni eliphakeme kakhulu ezinikezwa ngentengo ephansi kakhulu
Uhlelo oluguqukayo lwesaphulelo lumangaza amakhasimende
Ama-ejensi wokukhangisa edijithali anganikeza imiphumela emihle isikhathi ngasinye uma enethimba lezingqondo zokudala, ezinethalente, ezisebenzayo nezishukumisayo.
USemalt uyaziqhenya ngokuba neqembu eligcwele lezi zimfanelo. Ngeqembu leSemalt , uthola ngaphezu kwengqondo ye-115 yezingqondo ezinhle kakhulu ezivela embonini kusevisi yakho.
Laba ochwepheshe baqonda kuqala izidingo zebhizinisi lakho bese behlanganisa ubuchwepheshe nolwazi lwabo ukukunikeza imiphumela ethe xaxa.
Imizamo yabo ehlangene ikhuthaza ubukhona be-inthanethi bebhizinisi lakho. Amakhasimende akho azokuthola iwebhusayithi yakho angathola isikhundla esiphezulu kuma-SERPs (Amakhasi Wokusesha Injini).
Isingeniso sezinsizakalo Zokukhangisa Zedijithali
Ukuqonda Semalt nezinsizakalo zayo, kubalulekile ukuthi wazi, okungenani, izisekelo Zokumaketha Kwedijithali.
I-SEO imele i-Search Enjini. Kuyinqubo yokwenza kahle okuqukethwe kwewebhusayithi ukuze ifinyelele phezulu kuhlu lwe-organic yezinjini zokucinga.
Ku-SEO, kukhona wena, injini yokusesha, nomuntu ofuna okuthile. Ungaba ngumnikazi webhizinisi / uchwepheshe wokukhangisa / umhlaziyi / umphathi wewebhu, futhi injini yokusesha imvamisa iGoogle.
Ake sithi ubhale i-blog echaza izinzuzo zokuzila kwamanzi. Futhi, ufuna izinjini zokucinga ukusikhombisa njengomphumela ophezulu lapho noma ubani efuna igama elingukhiye, izinzuzo zokuzila kwamanzi.
Ukuze uthole lokho, kufanele wenze ngcono okuthunyelwe kwebhulogi. I-Google izoyibonisa njengomunye wemiphumela ephezulu uma umuntu efuna lelo gama elingukhiye.
Ukuqonda okungcono kwe-SEO, bhekisa kumhlahlandlela we-SEO okufanele ubeke uphawu kwabaqalayo.
Yini i-Website Analytics?
Kuyinqubo yokuqoqa, yokuhlaziya, nokubika imininingwane yewebhusayithi. Kuyasiza abanikazi bebhizinisi ukuthi baqonde futhi basebenzise ukusebenza ngempumelelo kwewebhusayithi yabo.
NgeWebhusayithi Analytics, abanikazi bamabhizinisi bafunda ngalezi zindlela zokuziphatha nemisebenzi yezivakashi kusayithi labo:
Bangaki abantu abavakashele isiza?
Kwakungukuhambela kwabo kokuqala, noma babuyela izivakashi?
Bahlala isikhathi eside kangakanani esizeni?
Mangaki amakhasi afinyelele kuwo?
Imaphi amakhasi abawatholile?
Bafika kanjani kuwebhusayithi - ngesixhumanisi noma ngokuqondile?
I-SSL imele Isendlalelo Esilondekile. Ubuchwepheshe obuthuthukisiwe bokuphepha obuxhuma isiphequluli sewebhu kanye neseva yewebhu ngesixhumanisi esivikelekile.
Imvamisa, imininingwane edluliswa phakathi kwamaseva wewebhu kanye neziphequluli isesimweni sombhalo osobala. Uma kubaduni bengasusa imininingwane ethunyelwe phakathi kweseva yewebhu nesiphequluli, bangayisebenzisa kabi.
I-SSL iqinisekisa ukuthi yonke ingxenye yedatha edluliswa phakathi kwesiphequluli neseva yewebhu ihlala iyimfihlo. Ukuqonda okungcono, iya kuMhlahlandlela Wokuqalisa we-SSL: Ukuthi Kuyini Futhi Kungani Kwenza Iwebhusayithi Yakho Iphephe Kakhulu.
Kuyinqubo yokuthola izixhumanisi ezifanele kusuka kwamanye amawebhusayithi kusayithi lakho.
Inhloso yenqubo yokwakhiwa kwe-Link ukuqondisa izixhumanisi ezisezingeni eliphezulu kuwebhusayithi yakho. Kwandisa amathuba okuthi iwebhusayithi yakho ibe sezingeni eliphakeme kumaSERPs (Amakhasi Wemiphumela Yosesho).
Ukuthola imininingwane engaphezulu ngenqubo yokwakhiwa kwe-Link, ungaya kuleli khasi le- Wikipedia.
Iphothifoliyo yomkhiqizo weSemalt inezinsizakalo eziningi Zokumaketha zeDijithali. Abanikazi bebhizinisi elinenzuzo abayitholayo lapho bekhetha iSemalt ukuthi iningi lezinsizakalo zalo lilingana nezidingo zamabhizinisi.
Ukubonisana kwamahhala kwe-SEO
I-AutoSEO iyithuluzi elihlukile le-SEO elenzelwe abanikazi bebhizinisi / ochwepheshe bokumaketha / abahlaziyi / abaphathi be-web:
Ufuna ukukhulisa ubukhona babo be-inthanethi nokuthengisa
Awaziwa kakhulu nge-SEO kanye nemikhuba yayo
Kuncamela ukubona imiphumela ngaphambi kokutshala imali yazo entweni ethile
Ngemuva nje kokubhalisela i-AutoSEO, umhlaziyi wewebhusayithi uzokuthumela umbiko omfushane. Izokweluleka ukuthi ngabe iwebhusayithi yakho iyahambisana yini namazinga embonini nokuthi yini enye ongayenza ukuthuthukisa isikhundla sayo ezinjini zokucinga.
Izinzuzo eziphambili ze-AutoSEO yilezi:
Kwenza Iwebhusayithi isebenze: Iqinisekisa ukuthi iwebhusayithi yakho inomusa kakhulu ekusetshenzisweni kwezinjini futhi ihambisana nezindlela ezijwayelekile ze-SEO.
Kuthuthukisa ukubonakala kwewebhusayithi : Ithuthukisa iwebhusayithi yakho amagama asemqoka futhi iqinisekise ukuthi ifinyelela phezulu ku-Google uma umuntu efuna lawo magama asemqoka.
Ukuheha Abavakashi abasha: Ngokubonakala okuthuthukile kanye nokuphromotha okulungile, iwebhusayithi yakho izodonsa izivakashi eziningi. Futhi, uyazi ukuthi izivakashi eziningi zisho inzuzo engaphezulu.
Kwenyusa Ubukhona Be-Inthanethi: Kwenyusa ubukhona be-inthanethi bebhizinisi lakho elixubile, ngakho-ke, kuvula amathuba okukhula amaningi.
I-FullSEO iyindlela ethuthukile futhi esebenza kahle yokubeka iwebhusayithi phezulu ekhasini lemiphumela yokucinga yakwaGoogle.In FullSEO, ochwepheshe eSemalt benza izinhlobo eziningi zokwenziwa iwebhusayithi yangaphakathi nangaphandle. Baqinisekisa ukuthi uthola imiphumela engaphezu kwaleyo oyifunayo ngesikhathi esifushane.
Izinzuzo eziphambili ze-FullSEO yilezi:
Ilungiselela Iwebhusayithi: Iqinisekisa ukuthi iwebhusayithi yakho nokuqukethwe kwayo kuyahlangabezana nezindinganiso ze-SEO. Kuzothuthukisa ukuba khona kwebhizinisi lakho ku-inthanethi, ngakho-ke kuyenze idume kakhulu.
Kuthuthukisa Ikhwalithi Yesixhumanisi : I- FullSEO isusa izixhumanisi ezisezingeni eliphansi nezingazwisisi indawo yakho. Kuyaqinisekisa ukuthi ithrafikhi eya kusayithi lakho ivela kuphela kwezixhumanisi ezisezingeni eliphezulu.
Kuthuthukisa Isikhundla Semakethe : I- FullSEO isiza amabhizinisi ukukhulisa isikhundla sawo semakethe futhi aqhubekele phambili izimbangi zawo.
Imiphumela esheshayo nevumelanayo yesikhathi Eside: I- FullSEO iqinisekisa ukuthi uthola imiphumela hhayi ngokushesha nje kodwa futhi ngokungaguquguquki isikhathi eside.
I-E-Commerce SEO kaSemalt iyindlela ethuthukisiwe yokusiza ibhizinisi online likhule futhi lichume.
Ku-E-Commerce SEO, ochwepheshe eSemalt bakunikeza isisombululo esikhethekile nesishintshashintshayo sebhizinisi lakho. Kuyasiza ekuthuthukiseni ibhizinisi lakho emathubeni.
Izinzuzo ze-E-Commerce SEO
Okulandelayo izinzuzo eziphambili ze-E-Commerce SEO:
Amakhasimende Ahehayo: I- E-Commerce SEO yokuqala ihlose imibuzo yokuthengiselana efanele ibhizinisi lakho. Ngemuva kwalokho kwenziwa amasu wokuphromotha afanele ukusiza ibhizinisi lakho ukuheha abathengi abasha.
Ukulethwa Kwemiphumela: Njengoba izitolo eziningi ze-E-Commerce zingezona izinkomo zemali, abanikazi bazo balindele ukuthi imali etshaliwe ekuphakanyisweni kufanele ilethe imiphumela efiselekayo. I-E-Commerce SEO iqinisekisa ukuthi ukutshalwa kwezimali kwabo kuletha imiphumela efanele ngesikhathi esifushane.
Isikhundla samagama angukhiye ophansi: I- E-Commerce SEO iqinisekisa ukuthi iwebhusayithi yakho iba nezinga eliphakeme lamagama angukhiye ophansi futhi. Yingoba abantu abasesha ngamagama angukhiye asezingeni eliphansi bavame ukuthenga lapho befika esitolo esifanele se-intanethi.
Ukuhlaziywa kweNiche: Ochwepheshe be-e-commerce ne-SEO eSemalt bahlaziya ukuncintisana kwe-niche yebhizinisi lakho. Baqoqa imininingwane futhi bayisebenzisele ukusetha indlela ephumelela kakhulu yempumelelo yebhizinisi lakho online.
Yithuluzi lokuhlaziya elithuthukile elikusiza ukuthi ubhekele okwenzekayo emakethe. Iphinde ikuvumela ukuthi ulandelele isikhundla sezimbangi zakho.
Ithuluzi leWebhusayithi Analytics leSemalt likunikeza:
Iziphakamiso zegama elingukhiye zemishwana efanelekile yokuhweba
Ukulandelela nsuku zonke iwebhusayithi yakho ku-injini yokusesha
Izinga lokuthandwa kwebhizinisi lakho
Isikhungo sokubuka nokubona isikhundla samagama wakho angukhiye
Isikhungo sokucwaninga nokutadisha amazinga enjini yokucinga yezimbangi zakho
Izinzuzo eziphambili zethuluzi leWebhusayithi Analytics yilezi:
Isikhundla Iwebhusayithi yokuqapha: Leli thuluzi lisiza ekutholeni isikhundla sebhizinisi lakho emakethe. Imininingwane olunikezayo ikuvumela ukuthi uthole izici ezinhle nezimbi ezithonya isikhundla sesayithi lakho.
Iqapha Isimo Sabancintisana : Leli thuluzi elivela kwaSemalt libuye lidalule imininingwane yezimbangi zakho. Ungasebenzisa ulwazi oluhlinzeka ngalo ukuze usizakale.
Isiza Ekutholeni Izimakethe Ezintsha: Imininingwane eyitholayo ngemuva kokuhlaziywa kwebhizinisi lakho iyasiza ekutholeni amathuba wokukhula amasha ezimakethe ezintsha.
Iguqula idatha ibe amafomethi atholakalayo: Ungagcina yonke imininingwane enikezwe yileli thuluzi ngesimo samafayela e-PDF ne-Excel.
Isiza esiqala nge-HTTPS siphephile, sinobungani be-Google, futhi siheha izivakashi eziningi. USemalt unikeza izitifiketi ze-SSL zokuvikela iwebhusayithi futhi ayenze ibe sengozini yokuhlaselwa.
ISemalt inikezela ngokubonisana kwamahhala kwe-SEO lapho ochwepheshe bayo behlonza izingqinamba ze-SEO ngesiza sakho futhi banikeze izincomo zokuthuthukisa ubukhona bayo be-intanethi.
Ngakho-ke, lezi zinsizakalo ezivela kwaSemalt ziqinisekisa ukuthi ibhizinisi lakho online lithola impumelelo enkulu ngesikhathi esincanyana.
Lezi zindaba zimayelana nokuhambela ngempumelelo kwamakhasimende. Amanye amaklayenti ahambela inkonzo eyodwa, amanye aqoka amaningi, amanye ahamba ayobonisana mahhala nge-SEO ngaphambi kokwenza ucingo lokugcina.
Ukubuyekezwa Kwamakhasimende we-AutoSEO
Uma kukhulunywa nge-AutoSEO, amawebhusayithi angaphezu kwe-5,000 akhule ngeSemalt. Ukuzihlola ngokwakho, iya ekhasini le- Semalt Impumelelo . Lapha, ungahlunga lezi zingosi ngokuya ngomkhakha kanye nezifunda.
Izinombolo zikusho konke, noma esimweni seSemalt, amakhasimende asho konke. Ungavakashela ikhasi layo le- Client Testimonials bese udlula kubufakazi bevidiyo abangama-33 kanye nobufakazi obubhaliwe obu-146. Vele uthole ukuthi kusizile kanjani amakhulukhulu amaklayenti ekwenzeni ibhizinisi labo online.
Amacala we-SEO Amakhasimende
Ngabe ufuna ukuzwa uhambo lokuphumelela lwamakhasimende e-Semalt? Vele ungene ekhasini lamakhasimende e-SEO Clients futhi uhlangane namakhasimende abo ajabulile akhule kakhulu ngezinsizakalo ze-Semalt SEO.
ISemalt ingenye yama-ejensi ambalwa wokukhangisa weDijithali ahlanganisa amazwe angaphezu kwe-155 kuma-SEO.
Kukhona abathengisi bezinsizakalo zeSemalt ezingaphezu kuka-210.
Abasebenzi bakwaSemalt banolwazi ngezilimi eziningi. Bakhonza amakhasimende noma ngabe bakhuluma luphi ulimi.
Amaphrojekthi angaphezu kwama-30,000 akhushulwe nguSemalt asohlwini lwe-Top-10 lwemiphumela yokucinga.
USemalt unothrender ohlukile wokuqasha, iTurbo-The Turtle, okubuye uphawu lweSemalt. Kuyasebenza kakhulu, uhlala ehhovisi labo ngaso sonke isikhathi.
Kuleli zwe ledijithali, i-SEO isihluthulelo sempumelelo. Uma ubamba ulwazi olwanele nge-SEO futhi unesikhathi sokukhulisa isayithi lakho, kwenze ngokwakho.
Kodwa-ke, indlela enhle kakhulu ukuqasha izinsizakalo ze-Full-stack Digital Marketing Agency, njengeSemalt, futhi ibavumele baphathe zonke izidingo zokuthengisa ze-inthanethi zebhizinisi lakho.